'राज्य सञ्चालनको प्रमुख नीति नै राजनीति भएकोले टाढा रहन सकिदैन' -नरबहादुर पुन - Naya Online
आइतवार, अशोज ४, २०७७ (September 20th, 2020 at 4:17pm ) अन्तर्वार्ता
काठेखोला ४ तङ्गम बाग्लुङमा बुबा च्वाङ्सिन पुन र आमा दुर्गी पुनबाट जन्म लिएका नरबहादुर पुन (एनबी) हालै जनता समाजवादी पार्टी प्रवास विशेष प्रदेश समिति मलेसियाको अध्यक्ष तथा जनता समाजवादी पार्टी मगर संघको विदेश बिभागको विभागिय संयोजक छन् । पुनसँग भएको अनलाइनवार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
मलेसिया बस्दै आउनुभएको कति भयो ?
मेरो मलेसियाको बसाइँ सन् २००४ सालबाट हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा त पैसा कमाउन जान्छन्, तपाई त संघसंस्थातिर व्यस्त हुनुहुन्छ त ?
हो हाम्रो धेय पैसा कमाउनु नै हो तर हामी समाजमा बस्ने सामाजिक प्राणी भएको नाताले कुनै न कुनै संघसंस्थासँग आवद्ध भैहालिँदोरहेछ ।
कुन कुन संस्थाको कुन कुन तहमा काम गर्नुभयो ?
कुनै समयमा श्रमिक सङ्गठन लागेर श्रमिकहरूको हक हितको लागि मलेसियामा आवाज बुलन्द गर्ने र दुःख वा समस्यामा परेका नेपाली सहयोग/उद्धार गर्ने काम गरियो । त्यस्तै लाङ्घाली समाज, प्रवासी मगर संघ मलेसिया पेनाङको संयोजक, प्रवासी मगर संघ, मलेसियाको उपाध्यक्ष, बरिष्ठ उपाध्यक्षहुदै नेपाल मगर संघको मलेसिया अध्यक्षसम्म र केही समय जनजाति महासंघ मलेसियामा नेपाल मगर संघ मलेशियको नेतृत्व गर्दै जनजाती महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको भुमिकामा पनि रहेर काम गरेको थिएँ । नेपालको बसाइँमा पार्टीको जिल्ला र गण्डकी प्रदेश स्तरीय कमितिमा रहेर पनि काम गरेको थिएँ ।
रोजगार र संघसंस्था एकैचोटी भ्याउनुहुन्छ ?
प्रवासमा रोजगारीमा भएकै कारण स्वभाविक रूपमा पहिलो प्रथामिकता रोजगारी रहनेछ त्येस अलावा छुट्टिका समय वा बचेखुचेका समयहरूलाइ संघसंस्थातिर लगानी गर्ने हो ।
नेपाल आएर केही समय व्यावसाय पनि गर्नुभएको रहेछ, किन छाड्नुभयो ?
हो केही समय नेपाल सरकारले मलेसियाको श्रम सम्झैता रोकिदिएको कारण नेपालमा रहँदा व्यावसायी बन्ने प्रयास गरेको थिएँ तर श्रम सझौता खुलेपछि पुनः मलेसिया फर्किए ।
नेपालमा गर्न सकिन्छ भनेर केहीले भन्दैछन्, तपाईले चाहीँ नसक्नुभएको हो कि ? बजार छैन ?
होइन, तपाइले भन्ने जस्तै । आखिर हामी नेपालमै आएर केही गर्ने नै हो। अहिले मलाइ कम्पनीले ‘रिकल’ गरेकै कारण मलेसिया नै आएको हुँ ।
मलेसियामा त अहिले जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभएछ, कहिलेदेखि पार्टीमा आवद्ध हुनुभयो ?
म नयाँ शक्ति नेपाल स्थापनाकाल देखि नै यो राजनितिमा लागेर बौद्धिक व्यक्तित्व पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भटराईलाई साथ दिएको हुँ ।
नेपालमा छँदा पनि राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो ?
जब म राजनितिमा लागे । त्यसयता म नेपालमा हुँदा वा विदेशमा हुदा नेता तथा त्यहाँका समाजहरूसँग जोडिएर राजनितिमा निरन्तर रहिरहेको छु ।
जनता समाजवादी पार्टीको कुन कुराले आकर्षित गर्यो ?
सर्वप्रथम त म बौद्धिक व्यक्तित्व आदरर्णीय नेता पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भटराई, उहाँको बौद्धिकता, उहाँको नौ महिने अर्थमन्त्री कार्यकाल र सत्र महिने प्रधानमन्त्री कर्यकालमा गरेका ऐतिहासिक काम र निर्णय गर्न सक्ने क्षेमतामा मेरो प्रभाव रहयो । पार्टीले लिएका नीति र सिद्धान्तमा संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद यस्का श्रेयहरू नै हुन् । पहिचान सहितको संघीयता, देश विकास र स्थिर सरकार हुन्नको लागी प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन, सबै जातजाती, भेषभुषा, धर्म संस्कृति, पिछडा वर्ग र लैङ्गिक समानताको लागि पूर्ण समानुपातिक सांसद र भ्रष्टाचार रोक्नको लागि जनलोकपालको ब्यवस्था आदि इत्यादि ।
प्रवासमा रहनेहरूले नेपाली राजनीतिक पार्टीको संगठन गर्नेपर्छ ?
त्यो अनिवार्य होइन तर पनि हामी सचेत प्राणि भएकै कारण ज्ञान बिज्ञान र दर्शनप्रति झुकाव रहदोरहेछ ।
कम्पनीमा काम पनि गर्नुहुन्छ, संगठन कसरी चलाउनुहुन्छ ?
सङ्गठन एउटा व्यक्ति नभई संस्था भएको कारणले संस्थागत निर्णयबाट नै संस्था चल्छ । संस्थामा नीति र नियम हुन्छ । यदि आर्थिक पक्षको कुरा गर्नु भएको हो भन्ने लेवी र स्वेछिक सहयोग नै यस्को मुख्य आयश्रोत हुन्छ ।
मलेसियामा अध्यक्ष भएको हैसियतलाई नेपालमा पार्टीले कुन तहमा राख्ला ?
विधानत हाम्रो पार्टीले पार्टी भित्रको सांगठनिक संरचना १०+१ प्रदेशको परिकल्पना गरेको छ । जस्मा +१ भन्नेको गैर भौगोलिक प्रदेश र प्रादेशिक विशेष प्रदेश गरी दुईवटा प्रदेशलाई जनाउछ । प्रादेशिक विशेष प्रदेशमा अहिलेसम्म २१ राष्ट्रमा हामी सङ्गठीत छौ । त्यसमध्य एउटा राष्ट्र मलेसिया हो यसलाई जिल्ला सरहको संरचना र नेतृत्व विधानत उत्लेख गरिएको छ । यद्यपि हाम्रो पार्टीले सबै तहमा प्रतिस्प्रर्धात्मक विधिबाट नेतृत्व चयन गर्ने भएको हुनाले प्रारम्भिक कमिटि नै सर्वेसर्वा कमिटि हुन्छ ।
नेपालमा फर्किएर राजनीतिमै होमिने योजना हो ?
राज्य सञ्चालनको प्रमुख नीति नै राजनिति भएको कारणले राजनितिबाट टाढा रहन सकिदैनजस्तो लाग्छ ।
अन्तमा तपाइले विदेशमा रहँदा पनि सझेर तपाइको मिडियामा मेरो कुरा राख्न स्थान दिनुभयो । यस्को लागि तपाईं र तपाईंको टिमलाई धेरै–धेरै धन्यबाद दिन्न चाहन्छु ।